Horjooge sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo gacanta lagu dhigay – Radio Muqdisho
Ciidanka Sirdoonka iyo Nabadsugidda Soomaaliya oo howlgal ka sameeyay Hotello ku yaala Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay horjoogaha afaraad ugu sareeya Ururka Gumaadka Ummadda Soomaaliyeed ee UGUS, kaasi oo ku dhuumaaleysanayay Hotelka Kismaayo Labo, halka ciidanka ay sidoo kale howlgallo ka sameeyeen Hotelka Kismaayo kow oo ay baaritaanno ku socoto dadkii laga qabtay labadaasi hotel.
Horjoogahan ayay ciidanka Siroonka ka war heleen in gudaha suuqa ku dhex dhuuaaleysanayo, taas oo xuraan ay sameeyeen kaddib suuragalisay in gacanta lagu soo dhigo, waxaana ay ciidanku sidoo kale howlgalka ku soo qabteen sideed qof oo kale, oo baaritaanno dheeraad ah lagu sameynayo.
Taliyaha Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare oo kormeer ku tegay Hoteelada ay ciidanka howlgalka ka sameeyeen ayaa amray in gabo ahaanba lala wareego labada hotel oo lagu kala magacaabo Kismaayo Kow iyo Kismaayo Labo ee ku yaalla gudaha suuqa Bakaaraha.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga gudaha Maxamed Yuusuf Cismaan oo saxaafadda kula hadlay gudaha Suuqa bakaaraha ayaa sheegay in ciidanku ay sii wadayaan howlgallada lagu baacsanayo haraadiga Al-Shabaab.
Afhayeenka ayaa markale digniin u diray milkiilayaasha guryaha iyo Hoteelada ka kireynayo maleeshiyaadka Al-Shabaab in lala wareegayo hadii shaqsiyaad ka tirsan Shabaab lagu qabto guryaha ama hoteelada ay ka kireeyeen, waxaana uu shacabka uga mahadceliyay sida ay ula shaqeeyeen ciidanka sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka.
Hotelka Kismaayo labo ayaa ah markii afaraad ee ay ciidanku ka qabtaan horjoogayaal ka tirsanaa kooxda Shabaab.